Revolisiona indostrialy fahatelo | Fanavaozana maintso
Adriana | | Toekarena an-trano, Angovo azo havaozina
ny revolisiona indostrialy dia dingana ara-tantara sy ara-tsosialy izay manova ny fomba ifandraisan'ny ankamaroan'ny sivilizasiôna fahefana.
Mila angovo ny olona hahafahany manatanteraka ny asany lehibe indrindra ary hatramin'ny nahitany loharanom-pahalalana samihafa dia nivoatra sy namolavola ny haavon'ny haitao izy.
Ny revolisiona indostrialy voalohany dia ny arintany, ny revolisiona faharoa dia ny herinaratra mifototra amin'ny menaka ary ny fahatelo dia ny fampiasana ny angovo azo havaozina ho loharanon'ny angovo.
Io foto-kevitra io dia novolavolan'ny ekonomista Jeremy Rifkin izay mino fa ny fomba tokana hanatsarana ny rafitra toekarena manerantany dia ny fanoloana ny lasantsy fosily.
Tsy mandeha intsony ny toekarena manerantany, nanana ny tsy fahalavorariana foana izy io nefa ankehitriny dia mahatratra ny fetran'ny faharetana noho ny haben'ny fahantrana sy ny tsy fitoviana eto an-tany, ny taha ambony indrindra amin'ny fandotoana ary ny famotehana ny harena voajanahary rehetra eto an-tany.
Izay miteraka olana ara-tontolo iainana matotra fa ny tena fantatra dia ny fiovan'ny toetr'andro fa tsy izy irery.
Ireo firenena dia tokony hifanolotra sy hifanampy amin'ny fanatontosana ny revolisiona indostrialy vaovao mifototra amin'ny angovo madio ary azo havaozina, izay mamela ny fitomboana ara-toekarena maharitra.
La teknolojia maitso ampiharina amin'ny vokatra isan-karazany dia ilaina mba hampihenana ny haavon'ny fandaniana angovo fa tsy mandoto ihany koa.
Ny revolisiona indostrialy fahatelo dia tokony hampiroborobo toekarena ambany karbaona.
Adinon'ny toekarena fa tokony hanompo ny olona fa tsy hanaiky azy, zava-dehibe ny fanatanterahana fiovana filozofika sy fiheverana ara-teknika hahatratrarana revolisiona tena ahafahan'ny tsirairay tafiditra ao anatin'ny rafitra.
Araka ny hita nandritra ny tantara, ny revolisiona roa teo aloha dia nifototra tamin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy, ny vitsy manana betsaka ary maro ny manana kely na tsy misy.
ny angovo azo havaozina Manome antsika ny fahafahana manova sy mamolavola ny rafitry ny toekarena izany mba ho ara-drariny kokoa, mitovy amin'ny fiarahamonina rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Revolisiona indostrialy fahatelo
Mitahiry angovo any amin'ny firenena mandroso